China Quality webbing, bokotra, kitapo plastika Quatation sy mpamatsy - Angel Garment Accessories Co., Ltd.
Ny orinasa dia nanolotra fitaovana maherin'ny 100 ho an'ny lamba farany.
Manome vahaolana mahomby sy malefaka ho an'ny mpanjifa isan-karazany eran'izao tontolo izao izahay Ary miaina izany.
Angel dia nanolo-tena amin'ny fitafiana ambongadiny sy ny endriny rehetra amin'ny famolavolana, ny fampandrosoana, ny famokarana ary ny varotra.
Ny vokatra dia amidy any Eropa sy ny tsenan'i Etazonia ary ny ozinina fitafiana ivelany any ivelany, ankehitriny ny fivarotana isam-bolana dia mety hahatratra 3 tapitrisa.
Bokotra voahangy kristaly
Taratasy taratasy mivalona vita pirinty
Kitapo plastika PE
Angel Garment Accessories Co., Ltd. dia famokarana matihanina sokajy roa amin'ny fanaovana crocheting, shuttleless; Pita malefaka malefaka, tsy matevina, ary karazan'entana manodidina ny arivo amin'ny famokarana orinasam-pandraharahana teknolojia avo lenta. Efa nanolo-tena amin'ny fitafiana ambongadiny fitafiana sy ny karazana famolavolana, fampandrosoana, famokarana ary varotra. Ny orinasanay dia azo ampanjifaina mifanaraka amin'ny fepetra takian'ny mpanjifa, toy ny fandokoana, vokatra vita amin'ny kofehy miaraka amin'ny fanoherana hazavana, fanoherana ny hafanana avo, fanoherana ny rano, fanoherana ny fitafiana, tsy manjavona ary toetra hafa, ireo vokatra dia be mpampiasa amin'ny akanjo, kiraro, satroka, kitapo, kilalao, fiara, asa-tanana, fitaovana fitsaboana ary indostria hafa ho fitaovana fanampiana. Ny orinasanay dia natsangana tamin'ny taona 2010, miorina eo an-tanàna manerantany malaza orinasa mpamorona - Dongguan. Miaraka amin'ny ezaky ny mpikambana rehetra ao amin'ny orinasanay, ny Angel Garment Accessories dia nanjary iray amin'ireo mpamatsy fividianana fitafiana tena tsara ao an-trano sy any ivelany.
Fa maninona no tokony hasiana mari-pana ny marika tenona vita amin'ny kofehy fanoherana sandoka?
Misy ny mpanjifa mieritreritra fa misy hidy koa manodidina ireo marika voatenona. Raha ny marina dia tsy fahatakarana diso io. Ny marika tenona dia an-tampona, izay ny fizotran'ny fanarahana manaraka.
Inona no fampidirana dingana jacquard ribbon jacquard ribbon
Jacquard aorian'ny fisehoan'ny kofehy fatratra telo-refy, jacquard lamina fihantsiana, tsy deformation mihitsy. Brac jacquard, logo hita mazava, loko mamirapiratra, tena kilasy, tsy afaka mampitombo ny fanampiny sanda vokatra, dia afaka manatsara ny marika sary .Ny endrika jacquard tsy manam-paharoa...
Ahoana no hanavahana ny kalitaon'ny webbing?
Betsaka ny karazana webbing ao amin'ny indostrian'ny webbing, izay be mpampiasa amin'ny sehatry ny indostria isan-karazany toy ny akanjo, fanontana marika, fitaovana kiraro, valizy, indostria, fambolena, fitaovam-piadiana, ary fitaterana.
Fandokoana loko webbing momba ny akanjo
ireto misy fomba roa lehibe handokoana kofehy lamba. Ny iray dia ny fandokoana be mpampiasa indrindra (fandokoana mahazatra), izay natao hitsaboana ny tadin'ny lamba amina vahaolana anaty loko simika. Fomba iray hafa ny fampiasana loko, izay amboarina ho potika kely tsy mety ritra afaka miraikitra a...